Waters Edge 05, Amaranth Lodge - I-Airbnb
Izibonelelo ze-spa/pool kufutshane (iintlawulo ziyasebenza)
• Misela phakathi kwechibi elinomhlaba oziihektare ezingama-28
• Isicwangciso esivulekileyo esivulekileyo sokuhlala/indawo yokutyela/ikhitshi
• Ifestile enkulu enefenitshala ejinga phezu kwechibi
• Ibhafu eshushu ekwidesika ejonge echibini
• 3 x amagumbi okulala een-suite
• 3 x iibhedi ezimbini
• Izilwanyana zasekhaya zamkelekile (intlawulo iyasebenza)
• Wi-Fi ifakiwe
• Uluhlu olubanzi lwemidlalo yasemanzini/imisebenzi ekufutshane
• Ukuloba okugqwesileyo kufumaneka ekuhlaleni nakwisiza
• £250 ibuyiswa idipozithi yokhuseleko iyafuneka
• Umgangatho owandisiweyo ukuya kwiglazing yesilingi, enika iimbono ezingaphazamisekiyo zechibi
• Umgangatho weplanga kuwo wonke
• Iisofa zesikhumba ezi-2 x 2/3, isitulo sengalo kunye neyunithi yekona enkulu
• 49” iTV yescreen esicaba
• Ubude obugcweleyo bokutyibilika iingcango ukuya kumgangatho
• Yakhelwe kwisikhenkcisi nesikhenkcisi
• I-oveni enye/igrill
• Yakhelwe kwiMicrowave
• Imeshini yovasa Impahla
• Isixhobo somiso
• Umgangatho omkhulu ovalelweyo, ojinga phezu kwechibi
• Itafile yeRattan enezitulo ezithandathu, iindawo zokuhlala ezimbini kunye netafile encinci yeglasi
• IJacuzzi ye6
• 5’ kabini
• Ucango olukhazimlisiweyo ukuya kwithala
• I-En-Suite – igumbi elikhulu elimanzi elineshawari yokuhamba, isitya, isiporo esifudunyeziweyo setawuli kunye neWC.
• 5” ibhedi yabantu ababini
• Ukugcinwa okwaneleyo
• En-Suite – ibhafu, isitya kunye neWC
• 5’’ ibhedi ephindwe kabini
• Iingcango zeglasi ezityibilikayo kwibalcony
• Ukujonga echibini
• Izitulo ezimbini zerattan kunye netafile encinci kwibalcony
• I-En-Suite - ishawari enkulu, isitya sokuhlambela ezimbini kunye neWC
Izixhobo zokuqesha iibhedi, izitulo eziphakamileyo kunye namasango ezinyuko akhoyo (iintlawulo ziyasebenza)
• UMda Wamanzi – ulwazi olubalulekileyo lwendawo
• I-Waters Edge ibonelela ngeendawo zokulala zala maxesha kwindawo esecaleni kwechibi eliphangaleleyo, izigaba ezithathu zokuqala ngoku ezigqityiweyo nesigaba sokugqibela sisaza kugqitywa.
• Lo mhlaba umi kwisigaba sokuqala esigqityiweyo kwaye uhlala kumabala anomhlaba.
• Nangona kungekho misebenzi yenziwayo ngoku, njengoko iziza zesigaba sesine zithengiswa, ulwakhiwo oluninzi luya kuqhubeka olunokubangela ukuphazamiseka okungephi. Ngelixa singazi ukuba umsebenzi wokwakha uya kwenziwa nini, siyayazi indawo kwaye, ke ngoko, sinokuqiniseka ukuba kuya kubakho ukuphazamiseka okuncinci kwiindwendwe ezihlala kule ndawo. Amaxabiso abekwe ngaphantsi kwexabiso lemarike ukubonisa ukuba uphuhliso alukagqitywa kwaye, ukuba umsebenzi wokwakha uyenziwa ngexesha lokuhlala kwakho, kunokubakho ukuphazamiseka.
IWaters Edge yingqokelela ekhethekileyo yamakhaya eeholide anesitayile sangoku. Ezi zakhiwo ziphefumlelweyo, iipropathi ezisecaleni kwechibi zonwabela iimbono ezimangalisayo phezu kwechibi leehektare ezingama-28 kunye nepropathi nganye ixhamla kwindawo enkulu yokuhombisa ekunika inkohliso yokunqunyanyiswa kumda wamanzi. IWaters Edge ime kumbindi weCotswold Water Park, eyona ndawo inkulu yogcino lwendalo yaseNgilani, iimayile ezi-5 kuphela ukusuka eCirencester kunye nemizuzu engama-90 ukusuka eLondon.
Ipropathi nganye ixhotyiswe kakuhle kwaye inikwe umntu, kodwa iphezulu, umgangatho. Indawo yokuhlala ebanzi / ikhitshi / indawo yokutyela yenza ezi zakhiwo zibe lolona khetho lubalaseleyo lokubhukisha iiholide zeqela, iindibano zosapho okanye ikhefu nje elifutshane nabahlobo. Igumbi lokulala ngalinye linobungakanani obukhulu, uninzi lunegumbi lokuhlambela elitofotofo le-en-suite. Igumbi lokulala elikhulu likwaxhamla kwi-balcony esecaleni kwechibi.
IWaters Edge ikumgama wokuhamba ukuya kwilali entle yaseMazantsi eCerney kunye neCerney Wick, ikhaya lee-pubs zelizwe ezintle, izinto eziluncedo zalapha ekhaya kunye nomtsalane welizwe. Yonwabela imidlalo yasemanzini, ukuloba, ukuhamba kunye neendlela zendalo kuyo yonke indawo ekufutshane, okanye uhlale nje, uphumle kwaye wonwabe.